FLEGT လိုင်စင်ရထုတ်ကုန်များ ကုန်သွယ်ခြင်း | FLEGT
FLEGT လိုင်စင်ရထုတ်ကုန်များ ကုန်သွယ်ခြင်း/
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPAs) များသည် တရားဝင်သစ်နှင့် သစ်ထွက် ပစ္စည်းများ ကုန်သွယ်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ တရားဝင်သစ်နှင့်သစ်ထွက်ပစ္စည်းများ ကုန်သွယ်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးရန် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် သစ်နှင့်သစ်ထွက် ပစ္စည်းများ တရားဝင်ခြင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ရန်နှင့် FLEGT လိုင်စင်ကိုအသုံးပြုပြီး တရားဝင်သစ်ထွက် ပစ္စည်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်စနစ် များကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ EU မှ FLEGT လိုင်စင်ရရှိထားသည့် သစ်များကို တရားဝင်သည်ဟု သဘောထားပြီး EU ဈေးကွက်သို့ ဝင်ခွင့်ပြုသည်။ VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် FLEGT လိုင်စင်ရသစ်များကိုသာ EU သို့ တင်ပို့ရန် အာမခံထားသည်။
ကွဲလွဲသည့်အချက်မှာVPA မိတ်ဖက်မဟုတ်သည့်နိုင်ငံမှ FLEGT လိုင်စင်မပါသည့်သစ်များ EU ဈေးကွက်သို့ မရောက်မီတင်းကျပ်သော ထိန်းချုပ်စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ သစ်ထိန်းချုပ်မှုသည် တရားမဝင်သစ်တင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်းရှင်အပေါ် ပြစ်ဒဏ်များ ပြဌာန်းထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
VPAs များ၏ အကြောင်းပြချက်မှာ တရားဝင်သစ်အတွက် ဈေးကွက်မက်လုံးများ ဖန်တီးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့အထိ ၆ နိုင်ငံမှ VPAs ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး FLEGT လိုင်စင်ထုတ် ပေးခြင်းကို ကျောထောက် နောက်ခံပြုသည့် စနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါသည်။ အခြား ၉ နိုင်ငံမှာလည်း EU နှင့် VPAs ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေကြပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် EU သို့ တင်ပို့သည့်အပူပိုင်းသစ်တောများမှ သစ်၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံသည် အဆိုပါ နိုင်ငံများမှ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့နိုင်ငံများသည် EU သို့ ပထမအဆင့် သစ်အချောထည် တင်ပို့သည့်လုပ်ငန်းအပေါ်အလွန်အကျွံမှီခိုလျက်ရှိသည်။ EU သို့လက်ရှိတွင် တင်ပို့မှု နည်းနေသော အခြားနိုင်ငံများ သည် ပိုမိုတင်ပို့ရန် VPA ကို မျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်နိုင်သည်။
သို့ရာတွင် VPAs များသည်သဘောတူညီရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် အချိန်ပို ကြာခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် VPA လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ တည်ရှိခဲ့သော သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရသောကြောင့်ဖြစ် သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ယခုစာရေးသားသည့်အချိန်တွင် မည်သည့်နိုင်ငံမှ EU သို့ FLEGT လိုင်စင်ပါ သစ်တင်ပို့ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် VPA ၏ သက်ရောက်မှုများ ကိုအကဲဖြတ်ရန် စောလွန်းနေသေးသည်။ ကုန်သွယ်မှု အပေါ် VPAs များ၏ သက်ရောက်မှုသည် အောက်ပါတို့အပေါ်တွင် မှီခိုနေသည်။ ။
EU အတွင်း စီးပွားရေး ပြန်လည်နလန်ထမှု အတိုင်းအတာနှင့် အမြန်နှုန်း
FLEGT လိုင်စင်ရရှိထားသည့်သစ်များ EU သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပို့ခြင်းများ
ဥရောပသမဂ္ဂ၏သစ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် အာဏာသက်ရောက်ရေး
သို့ရာတွင် နောက်ဆုံးကုန်သွယ်မှုစာရင်းဇယားရရှိရန် ကြန့်ကြာနေမှုသည် FLEGT လိုင်စင်ရသစ်များ EU ဈေးကွက်တွင် ရရှိနေသော်လည်း ပမာဏနှင့် တန်ဖိုးများအပေါ် သက်ရောက်နေမှုများသည် တစ်နှစ်ကြာ သည် အထိမရှင်းလင်းသေးပါ။ သို့ရာတွင် နောက်ဆုံးကုန်သွယ်မှုစာရင်းဇယားရရှိရန် ကြန့်ကြာနေမှုသည် FLEGT လိုင်စင်ရသစ်များ EU ဈေးကွက်တွင် ရရှိနေသော်လည်း ပမာဏနှင့် တန်ဖိုးများအပေါ် သက်ရောက်နေမှုများသည် တစ်နှစ်ကြာ သည် အထိမရှင်းလင်းသေးပါ။
FLEGT လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ
လွတ်လပ်သော စျေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်VPA နောက်ဆက်တွဲ
Fripp, E. 2004. FLEGT and Trade: What Will the Impacts Be? Sustainable Development Programme, Chatham House. London. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Lawson, S. and McFaul, L. 2010. Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response. Chatham House, London. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]